RoboVac X80 iyo HomeVac H30, hami cusub ayaa ka soo gala eufy | Wararka Gadget
Nooca takhasuska leh ee otomaatiga guriga iyo ikhtiyaaraadka guriga eufy ee ku xiran ayaa go'aansaday inuu sharad ku galo si buuxda u gelitaanka suuqa faaruqa oo leh ikhtiyaar RoboVac X80 kuwaas oo ay ugu yeeraan robot -ka ugu horumarsan nadiifiyaha suuqa, iyo gacmo -nadiifiye -gacmeedkooda HomeVac H30, waxaan si qoto dheer ugu ogaan doonnaa tafaasiisha iyo sifooyinka cusub.
RoboVac X80 waa nadiifiyaha ugu horreeya ee robot -ka ee adduunka oo ay ku jiraan tiknoolajiyadda laba -geesoodka ah
marawaxadaha, taas oo Waxay bixisaa 2 matoor oo ah 2000Pa oo ah awood nuugid. Tani waxay si weyn u kordhineysaa cadaadiska firfircoon ee robotka, inay awoodaan inay hagaajiyaan aruurinta timaha xayawaanka 57,6% * waqti isku mid ah waqtiga ku qaatay nadiifinta si hufan oo wax ku ool ah hal baas. Iyada oo la adeegsanayo RoboVac X80 Hybrid, nadiifin qoto dheer ayaa suurtogal ah iyada oo leh shaqadeeda laba -geesoodka ah ee faaruqinta iyo xaaqidda isla waqti isku mid ah. Heerka isticmaalka haanta wasakhda ah ayaa kordhay 127% *, oo gaadhay
awoodda ilaa 600ml.
*> Macluumaadka ay bixiso summaddu
Si wada jir ah, iPath laser navigation iyo teknolojiyadda khariidadda caqliga leh waxaa ku shaqeeya
Sirdoonka Artificial (AI Map 2.0) wuxuu abuuraa khariidad sax ah oo guriga ah oo ka caawisa robotka xisaabinta a
nadaafad nadiif ah oo hufan oo aan la iloobin gees kasta.
Midda labaad ee sheekooyinka cusub ee eufy soo bandhigay maanta waa nadiifiyaha faaruqinta gacanta ee HomeVac H30,
kaas oo bixiya wax-qabad maalinle ah. Iyada oo leh nidaamka TriPower TM oo leh awoodda nuugista ugu badan,
way fududahay in la ilaaliyo jawi nadiif ah, caafimaad qabta oo ka madax bannaan dhammaan noocyada xasaasiyadda. Naqshadiisa
is haysta oo fudud, kaliya 808 garaam oo culeys ah, ka dhigaysa mid raaxo leh in la isticmaalo muddo dheer
waqtiga iyada oo meel lagu kaydinayo haan wasakh ah 250ml taas oo ay ka mid tahay a
Teknolojiyadda xoqidda boodhka si looga saaro timaha shaandhaynta si fudud.
Iyadoo ku xiran xirmada la doortay, HomeVac H30 waxaa ku jiri kara qalab lagu nadiifiyo gaariga, a
burush baabuur leh oo sahlaya nadiifinta timaha xayawaanka, iyo Xidhmada Infinity, burushka loogu talagalay
dabaqyo adag oo awood u leh in ay mar keliya ku faaruqiyaan oo ku xaaqaan.
Moodooyinka cusub ayaa diyaar u ah inay ka iibsadaan Spain dhammaadka Sebtember markay tahay
Amazon. Qoyska RoboVac X80 wuxuu ka bilowdaa € 499,99 iyo nooca X80 Hybrid wuxuu ku kici doonaa € 549,99.
HomeVac H30 waxay leedahay qiime bilow ah oo ah 159,99 XNUMX, taas oo ku kala duwan hadba nooca iyo agabka
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Noticias » RoboVac X80 iyo HomeVac H30, hami cusub ayaa ka soo baxa eufy